Gqamisa into evela kumfanekiso wonke | Izidalwa ezikwi-Intanethi
ULaura Carro | | Ihlaziywe 25/09/2017 00:52 | Ukufota, Photoshop, Amaqhinga
Kukho amaxesha apho sibona umfanekiso kwaye sicinge ukuba kuya kuba njani ukuba siqaqambisa indawo ethile, okanye into ethile.
Kule tutorial siza kukufundisa ukuba gqamisa into, okanye icandelo elithile, nokuba linokukhanya ngakumbi, umbala ongaphezulu, okanye ezinye izinto esizithandayo nesicinga ukuba zilungele fumana iziphumo esizifunayo.
Siqala ngokukhetha, ngaphakathi komfanekiso, into okanye icandelo esithanda kakhulu.
Sisebenzise i Ukukhethwa kweepoligoni, kuba kule meko asinakukhetha ngokuqinisekileyo ukuba sithatha isigqibo sokusebenzisa i-wand magic. Kodwa njengokuba ubona, ngomonde kunye neenkcukacha ezincinci unako.
Kuba imiphetho yokhetho ibukhali kwaye ngamanye amaxesha ayiphumi njengoko kulindelwe, siya kukufundisa iqhinga elikhawulezayo ichaze ngcono le miphetho. Ukuba kwisixhobo sokhetho siza kubona kwibar ephezulu ukhetho olubiziweyo Cokisa imiphetho, sicofa apho kwaye iwindow pop-up iya kuvela ngezi ndlela zilandelayo:
El unomathotholo ufumanisa umda kwaye ndiyichaze ngakumbi kancinci.
El egudileyo inciphisa imiphetho ngqo egobile.
I-calar ithetha ukufiphala ukhetho, ke akukho cutout ibukhali kangako
El ngokwahlukileyo uya kwenza ngokuchaseneyo noyilo.
Ukutshintsha komda yenza ukhetho incinci okanye inkulu.
Emva kokwenza eyona indibaniselwano ilungileyo yezi zikhetho, sicofa apha ukwamukela kwaye siza kubona iziphumo zolu khetho. Oko sikuphakamisa ngezantsi phinda lo mfanekiso ekhethwe njengelumkiso lokwenza into esingayithandiyo kwaye kufuneka siphinde sikhethe. Ukuphinda kabini sinokuya kwithebhu Uluhlu-oluphindwe kabini maleko, okanye senza nje Ctrl + J.
Nje ukuba kwenziwe oku, into esisele nayo yile Nika imvelaphi isiphumo esithanda kakhulu, kwaye sikwazi ukubalaselisa into esiyiphindayo. Kule meko sicinga ngayo susa wonke umbala ngasemva, kushiya kuphela i-strawberry ekhethiweyo ngombala. Ngale nto saya kuyo Uhlengahlengiso loMfanekiso-weLifa:
Ungasebenzisa ezinye izimvo, ezinje ngokutshintsha umbala uye kokunye, uwenze ukhanye kancinci, phakathi kwabanye. Ngapha koko siya kutshintsha ubumbeko lomfanekiso osisiseko, kunye ukuqaqambisa into into esasiyifuna.
Ungakulibali ukutyelela ezinye iitutorials zethu ngamaqhinga angaphezulu ukuze ube yingcali kulungelelwaniso.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukufota » Gqamisa into evela kumfanekiso wonke
Yenza umfanekiso odityanisiweyo